Daily Vakiteny – 2trondro
Home / Daily Vakiteny
Ephesians 4: 1-7, 11- 14
Matthew 9: 9- 13
9:9 Ary Jesosy, nony nandroso avy any, hitany, nipetraka teo am-birao famorian-ketra, ny lehilahy iray atao hoe Matthew. Ary hoy izy taminy:, "Manaraha Ahy." Dia niainga, dia nanaraka Azy.
9:10 Ary nony fa, raha nipetraka hihinana ao an-trano, indro, maro ny mpamory hetra sy ny mpanota no tonga, dia nipetraka hihinana tamin'i Jesosy sy ny mpianany.
9:11 Ary ny Fariseo, nahita izany, nilaza tamin'ny mpianany, "Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo mihinana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota?"
9:12 Fa Jesosy, nandre izany, nanao hoe:: "Tsy ireo izay salama izay ao mila mpanao fanafody, fa ireo izay manana aretina.
9:13 Koa dia, mivoaka ary, ka ianaro ny dikan'ny: 'Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà.' Fa tsy tonga hiantso ny marina, fa ny mpanota. "
Timothy 6: 2- 12
Luke 8: 1- 3
Timoty voalohany 3: 1- 13
Timoty voalohany 2: 1- 8
Fifindra 32: 7- 11, 13- 14
32:7 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Mandehana, midina. ny olona, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, efa nanota.
32:8 Efa nalaky niala tamin'ny lalana izay nambara ho azy ireo. Ary izy ireo nanao an-idina ho azy ombilahy kely, ary efa niankohoka teo anatrehany. Ary immolating niharam-boina ho azy, izy ireo hoe:: 'Io no andriamanitrao, Ry Isiraely, izay nitondra anao avy tany amin'ny tany Ejipta. ' "
32:9 Ary indray, Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "I mamantatra fa ity firenena ity dia mafy hatoka.
32:10 hanafaka ahy, ka ny fahatezerako ho tezitra aminy, ary Aho handringana azy, ary dia hahatonga anao ho firenena lehibe. "
32:11 Ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny, nanao hoe:: "Nahoana, Tompo O, ny fahatezerana no tezitra ny vahoaka, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, miaraka amin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery?
32:13 Tsarovy Abrahama, Isaac, ary ny Isiraely, mpanomponao, izay nianiananao tamin'ny ny tena tena, nanao hoe:: 'Hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary ity tany rehetra, momba izay efa nolazaiko, Homeko ny taranakao. Ary ianao no handova izany mandrakizay. ' "
32:14 Ary ny Tompo nionona tsy hanao ny ratsy izay efa nolazainy hamelezana ny vahoakany.
Timoty voalohany 1: 12- 17
Nomery 21: 4- 9
21:4 Dia niala teo an-tendrombohitra Hora, amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny Ranomasina Mena, ny faribolana manodidina ny tanin'i Edoma. Ary ny vahoaka dia nanomboka reraka ny dia sy ny zava-tsarotra.
21:5 Ary niteny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy, hoy izy ireo: "Nahoana ianao no mitarika antsika hiala tany Ejipta, mba ho faty any an-efitra? Bread tsy ampy; tsy misy rano. Ny fanahintsika dia efa izao nauseous noho izany indrindra sakafo maivana. "
21:6 Izany no antony, ny Tompo dia nampandeha ny menaran'afo teny amin'ny olona, izay naratra na namono maro tamin'izy ireo.
21:7 Ary dia niara-nandeha tamin'i Mosesy, ka hoy izy:: "Efa nanota izahay, satria efa niteny nanome tsiny an'i Jehovah sy ianao. Mivavaha, dia mba hanala ireo menarana aminay. "Ary Mosesy nifona ho an'ny olona.
21:8 Ary hoy Jehovah taminy: "Manaova menarana varahina, ary mametraka azy ho toy ny famantarana. Na iza na iza, rehefa namely, mijery aminy, ho velona. "
21:9 Noho izany, Mosesy dia nanao menarana varahina, ary nentiny ho eo ho famantarana. Ary izay efa namely nibanjina amboniny, izy ireo dia sitrana.
Filipiana 2: 6- 11
2:6 izay, na dia tao amin'ny endrika 'Andriamanitra, Tsy Diniho ny fitoviana amin'Andriamanitra zavatra ho nosamborin'ny.
2:7 Fa tsy, dia nofoanany ny tenany, naka ny endriky ny mpanompo, natao manam-pitoviana amin'ny olona, ary manaiky ny toetry ny olona.
2:8 Dia nanetry tena, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, na dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana.
2:9 Noho io, Andriamanitra efa nanandratra azy koa ary efa nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra,
2:10 amin'izay mba, amin'ny anaran'i Jesosy, ny lohalika tsirairay dia manenjana, izay any an-danitra, ny etỳ an-tany, ary ny olona ao amin'ny helo,
2:11 ary mba lela rehetra dia hiaiky fa i Jesoa Kristy Tompo ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra Ray.
Septambra 13, 2019
6:39 Ary izy nilaza taminy fampitahana hafa: "Ahoana ny jamba no mitarika ny jamba? Moa tsy samy hianjera any an-kady?
6:40 Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra. Fa ny tsirairay dia ho tanteraka, raha Izy dia tahaka ny mpampianatra.
6:41 Ary nahoana ianao no mahita ny sombin-kazo izay eo amin'ny mason'ny rahalahinao, raha ny vatan-kazo izay eo amin'ny masonao, tsy mihevitra?
6:42 Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao, 'Rahalahy, Aleo hesoriko ny sombin-kazo eo amin'ny masonao,'Raha ianao tsy mahita ny vatan-kazo eo amin'ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy, Esory aloha ny vatan-kazo amin'ny masonao, ary dia vao ho hitanao mazava tsara, mba hitarika ny sombin-kazo amin'ny mason'ny rahalahinao.
6:27 Fa Izaho kosa milaza aminareo izay mihaino: Tiava ny fahavalonareo. Manaova soa amin'izay mankahala anareo.
6:28 Misaora ireo izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manendrikendrika anareo.
6:29 Ary Raha misy mamely ny takolakao anankiray, manolotra koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny akanjonao, aza lavinao na dia ny akanjonao.
6:30 Fa hizara ho an'izay rehetra mangataka aminareo. Ary aza manontany indray izay maka ny anao.
6:31 Ary mitovy tanteraka amin'izay ianao, dia tianao ny olona mba hitondrana anao, hitondra azy ireo ihany koa.
6:32 Fa raha izay tia anareo, inona moa dia noho ny aminareo? Fa na dia ny mpanota tia izay tia azy.
6:33 Ary raha manao ny tsara ho an 'ireo izay manao soa aminao, inona moa dia noho ny aminareo? Tokoa, na dia ny mpanota mitondra tena izany.
6:34 Ary raha ampisambory ho an 'ireo avy izay manantena ny handray, inona moa dia noho ny aminareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, mba handray izany ho setrin'izany.
6:35 Ary tena, Tiava ny fahavalonareo. Manaova soa, ary hampisambotra, manantena na inona na inona ho valin'izany. Ary avy eo ny valim-pitianareo dia ho lehibe, ary ianareo ho zanaky ny Avo Indrindra, fa ny tenany ho tsara fanahy amin'ny tsy mahay mankasitraka sy ny ratsy fanahy.
6:36 Noho izany, ho feno famindram-po, tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo ihany koa.
6:37 Aza mitsara, dia tsy hotsaraina. Aza manameloka, ary dia tsy hohelohina. Mamelà ny, ary ianao dia ho voavela heloka.
6:38 Omeo, ary dia homena anareo: ny fatra tsara, hamatorana ny tadin'ny ary voahozongozona miaraka ary pofoanareo, dia hametraka eo amin'ny am-pofoany. tokoa, izay fatra ampiasainao mba hamarana, dia ampiasaina mba handrefesana miverina atỳ aminao indray. "